जन्मदेखि नै भाग्यमानी हुन्छन् यी ३ राशीका व्यक्ति, हेर्नुहोस् तपाईंको राशी कुन ? – Sandesh Press
तर सफलताको मार्गमा ग्रह र नक्षत्रको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ।केही मानिसको जन्म शुभ मुहूर्त अर्थात निकै राम्रो समयमा हुने गर्छ। जसका कारण उनीहरु जन्मदेखि नै भाग्यमानी सावित हुन्छन्।
कुम्भ राशि: फैसला त जो कोहीले लिने गर्छन्। तर कुम्भ राशिका मानिसले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अगाडि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने गर्छन्। कसैले भने सुनेकै भरमा यिनीहरुले काम गर्दैनन्।
Prevतपाईलाई पिनाश छ ? उसोभए थाहा पाउनुहोस यसका लक्षण,समस्या र समाधानका उपायहरु
Nextआफूलाई कहिलै कमजोर ठान्दैनन् यी राशिका व्यक्ति, कठिन परिस्थितीमा पनि हुँदैनन् विचलित
टाउको दुख्ने समस्या छ ? उसोभए झुक्किएर पनि नखानुहोला यस्ता चिज !
पुरानो नोटको मूल्य 10 लाख पार्नुहोस सम्पर्क नम्बर सहीत हेर्नुहोस् ।